Hoaxes na ọkọlọtọ ọkọlọtọ na-awakpo: site na edemede, nchịkọta akụkọ na njikọta na New World Order
gbara akwụkwọ NEPNEWS, OZI OZI	by Martin Vrijland	na 14 April 2017	• 16 Comments
O yiri ka esiwanye ike ịghọta otú e si egwu egwuregwu ahụ na teknụzụ zuru ụwa ọnụ. Na ụwa nke ebe mgbasa ozi ndị ọzọ, e nwere ụfọdụ ndị bịara inye Donald ụda na ndị ọzọ na-ahụ Putin ka nwoke na-alụ Agha Ụwa Ọhụrụ. A na-edozi saịtị ndị ikpeazụ ahụ [...]
Anyị ahụwo oké ụjọ na afọ ndị na-adịbeghị anya. Ebe nrụọrụ weebụ a na-ekwukarị mgbe ụfọdụ ma mgbe ụfọdụ, na-ekwu na ihe adịghị mma. Ụfọdụ nyochaa dugara na nkwubi okwu ahụ bụ na ụjọ na-atụle ndị ọzọ na e nwere 'ọkọlọtọ ụgha'. Nke ahụ apụtaghị na ọ bụla agha [...]
Nleta ha: 2.606.296